China Kutonhorera-Kubata Stainless Simbi Magetsi Kettle Manufacture uye Fekitori | Kennede
Big CAPACITY AND COMPACT DIMENSIONS-Kutenda kune dhizaini yayo uye inoyevedza, kettle inotaridzika diki. Asi maitiro ayo emukati ndiwo anonyanya kushamisa: Nehuwandu hwe1L-2.2L litres, kettle inofashaidza mvura yakakwana pasina nguva zvachose, kunyangwe kutenderera kwakakura.
KUGADZIRWA KAMIRI RUVIVI , DZIMBA DZISINGENA simbi, BPA YEMAHARA, IRI KUCHENA.-Imba yese yemukati yemubiki wemvura inogadzirwa nekudya-yakachengeteka SUS-304 simbi isina tsvina - isina BPA uye zvimwe zvinokuvadza. Dhizaini yemadziro maviri uye yakakosha-yekubata-bata coating inochengeta imba ichitonhorera uye mvura ichidziya kwenguva yakareba. Sezvo zvinhu zvinopisa zveketani zvakafukidzwa mujasi resimbi isina tsvina, kettle inonyanya kuchenesa.
KUNYANYA KUNYANYA KUKONZERA KUTESA-KUSVIRA KUSVIRA-KUSVIRA PASI UYE KUNOSIMA-MHANYA KUDZIVIRIRA.- Mukati meketero hamuna epurasitiki, kunze kwakapihwa nzvimbo inonakidza uye yakachengeteka yakapfava-yekubata - saka kettle yetii inodziya chete ruoko panguva yekushanda uye inova nechokwadi chekushanda kwakachengeteka. Nekuda kwekuoma-kumhanya kudzivirira, kettle inodzima otomatiki kana yakawandisa kana isina mvura yakazadzwa.
KUNYANYA KUNYARADZA NEKUZARURWA ONETOUCH, LEVEL INDICATOR UYE ELEGANT LED STRIP- Kuzadza mini kettle hakushande: chivharo chinovhura zvakanyanya uye chinovhurwa kuburikidza nebhatani rimwechete pamusoro - izvi zvinobvumira kuzadza kuri nyore nekudzvanya kamwe chete kwebhatani. Chiratidzo chemukati chemukati chinovimbisa kurongeka. Iyo inoyevedza LED tambo iri pasi pekutonga inokuratidza iwe mamiriro ekushanda ekettle nguva dzese.
1.0L simbi isina tsvina kaviri madziro emagetsi ketero
Kuwedzera simba: 1.0L
304 chikafu giredhi Stainless simbi
Kaviri madziro anti-scald, simbi mukati uye epurasitiki kunze
Mvura isingapindi tembiricha controller
Birai kudzivirira yakaoma
Saizi yekatoni: 57x40.5x42cm
Stainless simbi yakapetwa kaviri madziro ekugara tembiricha basa remagetsi kettle
Kuwedzera simba: 1.7L
Rated Simba: 1800W
Constant tembiricha basa
Saizi yekatoni: 57x41.5x51 cm
1.7L simbi isina tsvina kaviri madziro emagetsi ketero
1.5L simbi isina tsvina kaviri madziro emagetsi ketero
Saizi yekatoni: 57x41.5x47.2 cm
1.8L epurasitiki kettle yemagetsi
Rated Simba: 1500W
Chikafu giredhi epurasitiki kettle muviri
Chiratidzo chemvura inooneka
Saizi yekatoni: 48x44.7x52 cm
1.0L Stainless simbi yemagetsi ketero
Saizi yekatoni: 51.2x32.7x46 cm
2.0L Stainless simbi yemagetsi ketero
Kuwedzera simba: 2.0L
Saizi yekatoni: 66.5x44.5x57.5cm
2.3L Stainless simbi yemagetsi ketero
Kuwedzera simba: 2.3L
Saizi yekatoni: 68x42x50cm
Zvakapfuura: Mini fan ine Battery kubva kuKennede
Zvinotevera: Camping Lantern Rechargeable for Emergency